နိုဝငျဘာ 3, 2018 – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ ခါးကုန်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိပါစေ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ ခါးကုန်းတာက ခါးနာသလို လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ ခါးကုန်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီး ရှိပါ တယ်။ ခါးကုန်းတာက အများအားဖြင့် အသက်ကြီးတဲ့...
ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. မှဲ့ကင်ဆာ (Malignant Melanoma) အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ ဖြေ. မှဲ့ကင်ဆာဆိုတာ အတွေ့နည်းပေမယ့် အရေပြားမှာဖြစ်တဲ့ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ အရေပြားကင်ဆာ တစ်မျိုးပါ။ ရောင်ခြယ်မှုန်ထုတ်ပေးတဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေမှာစဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါပါ။ ဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်...
ရေငန်းသီး (Salak Fruit) ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ ရေငန်းသီး (Salak Fruit) စားရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။ ရေငန်းသီးက အင်ဒိုနီးရှားမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးရာက တခြားနိုင်ငံတွေကိုအများကြီး ရောက်လာတာပါ။ ရေငန်းသီးမှာ ဘီတာကယ်ရိုတင်းပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် မျက်စိကျန်းမာရေးကို အဓိကကောင်းမွန်စေပါတယ်။ပရိုတင်း၊...